Botnets ama Ransomware. Waa Maxay Badbaadinta Muhiimka ah ee Kumbuyuutarkaaga? - Kaliya weydiiso xajmiga
Maalmahan, ransomware waa mid ka mid ah hanjabaadaha ammaanka internetka ee ugu weyn. Dhawaan, weerarkii WannaCryptor ee saameeyey 350,000 kumbuyuutar ayaa soo jiidatay malaayiin ra'yiga ah oo ka yimid dadka isticmaala internetka iyo wakiillada amniga. Waxay u egtahay sida halista ugu weyn ee aan maanta la kulanno. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala internetka waxaa la kulma ku-xigeenka khatarta ah, kuwani waa baaskiil!
Inkastoo weerarrada is haysta ay runtii xanuun badan yihiin, haddana ugu yaraan waa la arki karaa. Botnets waxay xakameynayaan dhibaatooyinkooda foosha si qarsoodi ah - cheap windows hosting plans. Nidaamkani wuxuu si buuxda u kantarooli karaa malaayiin kombiyuutar iyo qalab kale oo shabakad ah.
Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka, ayaa sheegay in FBI ay qiyaastay in qiyaastii 500 milyan oo kombuyuutar ah sanad walba la qaado. Mashiinka cudurka qaba wuxuu u eg yahay noocyo kale oo khatar gelin kara amniga. Tusaale ahaan, waxaa lagu dhejin karaa ransomware oo wuxuu noqon karaa qalab ku habboon in loo qaybiyo nacfiga nooc kale. Cybercriminals waxay si fudud u baran kartaa botnetka si ay u qaybiso spam, iyo guusha guushu waxay noqonaysaa ku dhawaad ​​100%. Dhammaan tani waxay dhici doontaa marka mulkiilayaasha kombuyuutarku aysan ka warqabin waxa socda. Qaar ka mid ah khabiirada ayaa ku dooday in botnets ay leeyihiin kartida ay ku ciriiri karto internetka
Sababtoo ah kharajka boorsooyinka waa inuu kaa walwaa wax ka badan ransomware
Waxaa jira sababo badan oo ay boorsooyinka u keenaan halis weyn marka loo eego ransomware. Sidoo kale, looma arko, saameynta botnets waa mid baahsan. Waxay isticmaali karaan kombiyuutar cudurka qabaa si ay u diraan spamka iyo ransomware kale kombiyuutarada kale ama inay sameeyaan diidmada adeegga (DOS). Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu khiyaameeyo shabakadaha. Qof kasta waa in uu ka walaacsan yahay khatartaas, isagoo maskaxda ku haya in 50 ilaa 70 boqolkiiba tarjumada emailka ah inta badan la wareejiyo. Dhamaan emails oo leh xayawaan jilicsan, boqolkiiba 85 waxay ku xiran yihiin ransomware..
Milkiilaha kombiyuutarka cudurka qaba waxaa la kulma dhinacyo kala duwan oo khataraha amniga ah. Dembiilayaashu waxay ka heli karaan dhammaan macluumaadka boostadaada iyo warbaahinta bulshada. Qaarkood waxay iibiyaan macluumaadkaan halka kuwa kale ay u isticmaalaan ujeedooyin xunxun sida xadida xisaabaha bangiga dhibbanaha.
Qorshaha lacag-bixinta ee Botnet ayaa isbeddelay
Horaantii, shirkadaha macaamiisha ah waxay badanaa ku tiirsan yihiin qaybinta spam si ay lacag u sameeyaan. Boorsooyinka waaweyn sida Marina ayaa u diri kara in ka badan 90 bilyan oo spam maalintii. Laakiin saraakiisha iyo kuwa ka shaqeeya amniga ayaa si dhakhso ah ula qabsan doona botnets waaweyn oo ugu dambeyntii burburiyaan inta badan.
Innovation ee adduunka cybercrime ayaa soo bandhigay qaabab badan oo karti leh. Waxay hadda isticmaalaan P2P (Peer-to-Peer), qaab. Marka loo eego qaabdhismeedka moodooyinka P2P, bots waxay labadaba u adeegsadaan server iyo macaamil ahaanba. Waxay u diri karaan oo heli karaan amarro, taasina waxay ka caawineysaa inay ka fogaato guuldarada
Noocyo kale oo gaar ah, marka laga reebo kombiyuutarada, ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sii kordhaya. Kuwani waa server iyo qalab ku jira qaybta internetka (IoT).
Dambiileyaashu waxay ka faa'iideysanayaan awoodaha awoodda badan ee shabakadaha websaydhka iyo internetka si dhakhso ah loogu xakameynayo taraafikada iyo fidinta spam. Qalabka IoT-ga guud ahaan ma ahan mid si aan fiicnayn loo xaqiijiyay, taasina waxay ka dhigeysaa wax fudud in loo yaqaan 'botnets'. Shaqooyin kala duwan ayaa lagu fulin karaa iyada oo la adeegsanayo waxyaabahaan '', oo ay ku jiraan weerarada DDOS. Marka la eego koritaanka baaxadda leh ee IOM, kororka dhaqdhaqaaqa botta ee qalabka IoT waa mid halis ah. Waxaa la saadaaliyay in sannadka 2020 tirada tirada qalabka IoT ay gaari doonto 20.8 milyan.
Waxaa suurtagal ah in kombiyuutaro badan, server iyo 'waxyaabo' lagu xakumi doono botnets haddii macaamiisha iyo ururadu aysan ku cusboonaysiin qalabka iyo hababka difaaca haboon. Si looga fogaado dhibbanaha khatarta ah ee botnets, tababarka ammaanka waa furaha. Marka dadku ay ka warqabaan khatarta, hirgelinta nadaamka dhamaadka iyo qalabka ammaanka iyo nidaamyada shabakada waxay keeneysaa guul. Qalabka ammaanka ee internetka ayaa hadda bixiya difaaca khaaska ah ee ka caawiya helitaanka isgaarsiinta shakiga ee wadayaasha hawlaha bot.